အွန်လိုင်းမှာ နာမည်ကြီးနေတဲ့ တောရွာက ကျောင်းဆရာနဲ့ တပည့် လေးးများရဲ့ရာဇဝင်ထဲက အနော်ရထာ တင်ဆက်မှု မိုက်တယ်ဗျာ…. – သုတရသ
အွန်လိုင်းမှာ နာမည်ကြီးနေတဲ့ တောရွာက ကျောင်းဆရာနဲ့ တပည့် လေးးများရဲ့ရာဇ၀င်ထဲက အနော်ရထာ တင်ဆက်မှု မိုက်တယ်ဗျာ…. လူပြည်ဆိုတာ သုံးဆယ့်တစ်ဘုံမှာ အမြင့်မြတ်ဆုံးနဲ့ ရဖို့ခဲယာဉ်တယ်လို့ မှတ်သားဖူးပါတယ်။ ရခဲလှတဲ့လူ့ဘ၀မှာ ကုသိုကောင်းမှုတွေလည်းလုပ် စားဝတ်နေရေး လူမှုရေးတွေနဲ့ နေ့စဉ်နပန်းလုံးနေရပီး
အဆင်ပြေတဲ့အခါလည်းရှိသလို အဆင်မပြေမှု ဆုံးရှုံးမှုဆိုတာလည်း လူတိုင်းလိုလို ကြုံတွေ့ကြရတာ ဓမ္မတာပါ။ အဲလို စိတ်ဆင်းရဲ စိတ်သောကရောက် စိတ်ထိခိုက်စရာဆိုတာတွေကို မေ့ပြစ်ပီး ရခဲလှတဲ့လူဘ၀ကြီမှာ ပျော်ချိန်မှာပျော်လိုက်မယ် စီးပွားရှာချိန်စီးပွားရှာမယ် တရားရှာချိန်မှာ တရားရှာမယ်ဆိုရင် အပြည်စုံဆုံးဘ၀မဟုတ်တောင်မှ အဓိပ္ပါယ်ရှိတဲ့
ဘ၀လို့ဆိုရင် မှားမည်မထင်ပါ။ အခု ဒီဗွီယိုထဲမှာတော့ တောရွာက ကျောင်းဆရာနဲ့ တပည့် လေးးများရဲ့ရာဇ၀င်ထဲက အနော်ရထာ ဆိုတဲ့ ဇာတ်လမ်းလေးကို တင်ဆက်ကပြနေကြတာ မြင်ရတော့ စိတ်ထဲ ကြည်နူးမိပါတယ်ဗျာ။ တကယ်တော့ အပျော်ဆိုတာ ဘာတေရှိမှ ညာတေရှိမှဆိုတာ ပျော်ရွှင်မှုအစစ်မဟုတ်နိုင်ပါဘူး။
အှနျလိုငျးမှာ နာမညျကွီးနတေဲ့ တောရှာက ကြောငျးဆရာနဲ့ တပညျ့ လေးးမြားရဲ့ရာဇဝငျထဲက အနျောရထာ တငျဆကျမှု မိုကျတယျဗြာ…. လူပွညျဆိုတာ သုံးဆယျ့တဈဘုံမှာ အမွငျ့မွတျဆုံးနဲ့ ရဖို့ခဲယာဉျတယျလို့ မှတျသားဖူးပါတယျ။ ရခဲလှတဲ့လူ့ဘဝမှာ ကုသိုကောငျးမှုတှလေညျးလုပျ စားဝတျနရေေး လူမှုရေးတှနေဲ့ နစေ့ဉျနပနျးလုံးနရေပီး
အဆငျပွတေဲ့အခါလညျးရှိသလို အဆငျမပွမှေု ဆုံးရှုံးမှုဆိုတာလညျး လူတိုငျးလိုလို ကွုံတှကွေ့ရတာ ဓမ်မတာပါ။ အဲလို စိတျဆငျးရဲ စိတျသောကရောကျ စိတျထိခိုကျစရာဆိုတာတှကေို မပွေ့ဈပီး ရခဲလှတဲ့လူဘဝကွီမှာ ပြျောခြိနျမှာပြျောလိုကျမယျ စီးပှားရှာခြိနျစီးပှားရှာမယျ တရားရှာခြိနျမှာ တရားရှာမယျဆိုရငျ အပွညျစုံဆုံးဘဝမဟုတျတောငျမှ
အဓိပ်ပါယျရှိတဲ့ ဘဝလို့ဆိုရငျ မှားမညျမထငျပါ။ အခု ဒီဗှီယိုထဲမှာတော့ တောရှာက ကြောငျးဆရာနဲ့ တပညျ့ လေးးမြားရဲ့ရာဇဝငျထဲက အနျောရထာ ဆိုတဲ့ ဇာတျလမျးလေးကို တငျဆကျကပွနကွေတာ မွငျရတော့ စိတျထဲ ကွညျနူးမိပါတယျဗြာ။ တကယျတော့ အပြျောဆိုတာ ဘာတရှေိမှ ညာတရှေိမှဆိုတာ ပြျောရှငျမှုအစဈမဟုတျနိုငျပါဘူး။
ပညာရေးဝန်ထမ်း ဆရာ/ ဆရာမ နှင့် ရှေ့နေ/ တရားသူကြီးများလဲ ပါဝင်သပိတ်မှောက်